4-DHEA အမှုန့် (571-44-8) hplc≥98% Buy | AASraw prohormone
4-DHEA အမှုန့် (571-44-8)
/ ထုတ်ကုန်များ / Prohormone / 4-DHEA အမှုန့် (571-44-8)
SKU: 571-44-8. အမျိုးအစား: Prohormone
AASraw CGMP စည်းမျဉ်းများနှင့် trackable အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှုစနစ်ကအောက်မှာ 4-DHEA မှုန့်အစုလိုက်အပြုံလိုက်အမိန့် (571-44-8) မှဂရမ်ကနေပေါင်းစပ်နှင့်ထုတ်လုပ်မှုစွမ်းရည်နှငျ့အတူရှိ၏။
သငျသညျအစှမျးသတ်တိနှငျ့ကြွက်သားကျန်းမာရေးတိုးမြှင့်ဖို့လိုတဲ့အခါ, ထိုကဲ့သို့သောအဖြစ် prohormones 4-DHEA အမှုန့် အကောင်းဆုံးကျန်းမာရေးနှင့်ကြွက်သားစွမ်းဆောင်ရည်ကနေအကျိုးခံစားရဖို့တလမ်းတည်းဖြင့်ဖြစ်ပါသည်။ 4-DHEA နိုက်ထရိုဂျင် retention ကိုခွန်အားနှင့်, ကြွက်သားမှသွေးစီးဆင်းမှု၏အသံအတိုးအကျယ်ကိုအားပေးအားမြှောက်တဲ့ prohormone ဖြစ်ပါတယ်။ နည်းပါးလာဘေးထွက်ဆိုးကျိုးနှင့်အတူအထင်ကြီးရလဒ်များကိုရှိနှင့်သင်၏အစွမ်းသတ္တိကို-သင်တန်းနှင့်ခန္ဓာကိုယ်အဆောက်အဦအစီအစဉ် 4-DHEA ထည့်သွင်းခြင်း။
4-DHEA အမှုန့် အခြေခံဇာတ်ကောင်
အမည်: 4-DHEA အမှုန့်
ပွိုင့်အရည်ပျော်: 138-141 ℃
သိုလှောင်မှုကို Temp: ROOM တွင်အပူချိန်
အရောင်: အဖြူရောင်သို့မဟုတ်ပိတ်အဖြူ Crystalline အမှုန့်
ဓာတုအမည်များ: 4-DHEA အမှုန့်
အခြားအမည်များ: 4-dehydroepiandrosterone, 4-DHEA အမှုန့်, 571-44-8
5-DHEA ကျန်းမာအန်ဒရိုဂျင်လှုပ်ရှားမှုလှုံ့ဆော်ပေးခဲ့တယ်နှင့်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာ DHEA အဆင့်ဆင့် restore စေခြင်းငှါတစ် prohormone ဖြစ်ပါတယ်။ ယင်းလုပ်ငန်းစဉ်များ, လက်ျာအချိန်တွင်ဖြစ်ပေါ်သည်အထိဒါဟာမလှုပ်မရှားနေဆဲဖြစ်သည်။ ဟော်မုန်း DHEA သည့် adrenal ဂလင်းကနေထုတ်လုပ်ပေမယ့်ဦးနှောက်လည်းစေသည်။ DHEA ကြွက်သားအရွယ်အစားနှင့်ကြွက်သားကျန်းမာရေးတိုးမြှင့်ဖို့လိုခငျြသူမြားသဖွငျ့အမြားဆုံးဆန္ဒရှိတဲ့အကျိုးကျေးဇူးဖြစ်သောအန်ဒရိုဂျင်နှင့်အီစရိုဂျင်,fထုတ်လုပ်မှုများအတွက်ခွင့်ပြုပါတယ်။ ခန္ဓာကိုယ်အသက်အရွယ်နှင့်အမျှခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာ DHEA ထုတ်လုပ်မှုလျော့နည်းစေသည်။ ခန္ဓာကိုယ်ထဲတွင် DHEA အတွက်လျှော့ချရေးဟော်မုန်းရောဂါလျှော့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ function ကိုနှင့်အရိုးပွရောဂါစေပါတယ်။
4-DHEA အမှုန့်ကိုခန္ဓာကိုယ်အတွက်သဘာဝ DHEA နဲ့တူအောင်နေတဲ့ prohormone ဖြစ်ပါတယ်။ သင်၏ကျန်းမာရေးနှင့်ကြွက်သားအစှမျးသတ်တိအစီအစဉ် 4-DHEA အမှုန့်ထည့်ခြင်း၏အကျိုးကျေးဇူးများပေါများဖြစ်ကြသည်။
လေ့ဟိုစတီရွိုက်နှင့်ဆက်စပ်အနိမျ့အီစထိုဂျင်ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေ။ အီစထိုဂျင်ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးအမျိုးသမီးတွေအတွက်တိုးမြှင့်မျက်နှာဆံပင်, အမျိုးသားများတွင်ရင်သားသေးငယ်ရင်သားတစ်သျှူး, အမျိုးသမီးများအတွက်မျက်နှာဆံပင်, ယောက်ျားအတွက်သေးငယ်တဲ့ဝှေးစေ့နှင့်စိတ်ကျရောဂါများပါဝင်သည်။ 4-DHEA အမှုန့်တူညီတဲ့သက်ရောက်မှုမရှိပါ။ အီစထိုဂျင်ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတုံ့ပြန်မှုများမှာ, ဒါကြောင့်သူတို့တိုးမြှင့်အီစရိုဂျင်၏ရလဒ်ဖြစ်ပါသည်။
ကြွက်သားအတွင်းရှိတိုးချဲ့နိုက်ထရိုဂျင် retention ကိုအတူ mass အမြတ်
အများဆုံးကြွက်သား bulk များအတွက်တိုးမြှင့ပစ်မှတ်ထားကယ်လိုရီ retention ကို
4-DHEA အမှုန့်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်ကြောင့်လျှော့ချဖို့, ကြွက်သားထုထည်မဟုတ်မြှင့်တင်ရန်ဟန်ချက်ညီအောင်ထိန်းရန်လိုအပ်ပါသည်။ ဒါကြောင့်သင့်ရဲ့တိကျတဲ့လိုအပ်ချက်ဖြည့်ဆည်းဖို့ကဆက်ပြောသည်နိုင်ပါသည်နည်းလမ်းများနှင့် ပတ်သက်. ပရော်ဖက်ရှင်နယ်တစ်ဦးကျန်းမာရေးပြောဆိုပါ။ ဒါဟာသံသရာထောက်ခံမှုနဲ့ post သံသရာကုထုံးနှင့်အတူ 4-DHEA အမှုန့်ထည့်သွင်းရန်မရှိမဖြစ်အရေးပါသည်။ ဒါဟာကုန်ကျစရိတ်များနှင့်သောက်သုံးသောလိုအပ်ချက်များကိုလျှော့ချရန်ဆေးလုံး form မှာ 4-DHEA အမှုန့်ကိုယူဖို့လည်းလွယ်ကူသည်။ 4-DHEA အမှုန့်မြင့်မားစုစည်းဖြစ်ပြီးမြန်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Liposomal တောင့ အသုံးပြု. ခန္ဓာကိုယ်ထဲသို့စုပ်ယူနိုင်ပါတယ်တဲ့ပါးစပ်ဝင်းဖြစ်ပါတယ်။
4-Androsterone စုပ်ယူအပေါ်သို့ Two-ခြေလှမ်းအသွင်ပြောင်းမှတဆင့် testosterone ဟော်မုန်းသို့ပြောင်းလဲသောစိုစွတ်သော, အစွမ်းထက်ဟိုအေးဂျင့်သည်။ ဒါဟာအသုံးပြုသူတွေရဲ့အသည်းနဲ့ကိုယ်တွင်းအင်္ဂါအပေါ်အနည်းငယ်မျှသာသက်ရောက်မှုသို့မဟုတ်စိတ်ဖိစီးမှုရှိပါတယ်ဆိုလိုတာကတစ် nonmethylated prohormone ဖြစ်ပါတယ်။
6-Andros တစ်ပုံးအဖြစ်ကောင်းစွာအလုပ်လုပ်တယ်သို့မဟုတ် bulk အခြား prohormones နှင့်အတူကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ တဦးတည်းဝင်းသံသရာများတွင်အသုံးပြုသည့်အခါ 700 မှာ 1,000 မီလီဂရမ်, သင်အရှိဆုံးကြောက်မက်ဘွယ်ရလဒ်ရရှိမည်ဖြစ်သည်။ တစ်ဦး stack ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုအဖြစ်, 4-Andros ရဲ့ချိုမြိန်အစက်အပြောက်ဆေးများမီလီဂရမ် 300 မှ 500 အကြားရှိပါတယ်။
အရင်ကဆိုရင်များအတွက်: 4-4 မီလီဂရမ်မှာ6ရက်သတ္တပတ်မှ 300 များအတွက် 500-Androsterone ကို run ။
ဝါရင့်အသုံးပြုသူများအတွက်: 4-6 မီလီဂရမ်မှာ 8 ရက်သတ္တပတ်မှ 300 များအတွက် 750-Androsterone ကို run ။
ဘယ်လို 4-DHEA အမှုန့်အကျင့်ကိုကျင့်
Prohormones အများဆုံးဟော်မုန်းရလဒ်များကိုတစ်ခုတတ်နိုင်ဖြေရှင်းချက်ဖြစ်ကြသည်။ Prohormones နှုတ်ယူကြသည်ဒြပ်ပေါင်းများဖြစ်ကြသည်။ Prohormone ဝင်းလုပ်ရပ်များတစ်ဦးဟော်မုန်းများအတွက်ရှေ့ပြေးဖြစ်ကြသည်ကိုဆိုလိုသည်။ သူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်တွင်, သူတို့ထိရောက်သောမရှိကြပေ။ သူတို့အလုပ်သူတို့သွေးကြောမှတစ်ဆင့်ဖြန့်ဝေရန်ဖြစ်ပါသည်။ အဆိုပါ prohormone တစ်ဦးဟော်မုန်းပြောင်းလဲနေသည်နှင့်တစ်ပြိုင်နက်ပြုလုပ်ဟော်မုန်းပမာဏထိန်းညှိ။ အားကစားသမားစွမ်းဆောင်မှုနှင့်ကြွက်သားကျန်းမာရေးတိုးတက်ကောင်းမွန်လာရန်ပရိုတိန်းကိုပြောင်းလဲနိုင်တဲ့လိုလားသူပရိုတိန်းဖြစ်ခြင်းတစ် prohormone ၏စဉ်းစားပါ။ 4-DHEA အမှုန့်တဦးတည်းထိုကဲ့သို့သော prohormone ဖြစ်ပါတယ်။
ကိုလောင်ခံရပြီးနောက် 4-Andros သင့်ရဲ့သွေးကြောထဲသို့ဝင်ခြင်းနှင့် testosterone ဟော်မုန်းသို့ပြောင်းပေးပါတယ်။ အဆိုပါဒြပ်ပေါင်းသည်သင်၏လိင် drive ကိုတိုးမြှင့်နေချိန်တွင်အရွယ်အစားနှင့်အစွမ်းသတ္တိကိုတိုးမြှင့်ဖို့ရရှိလာတဲ့တစ်သိသိသာသာမြင့်မားတဲ့ဟိုအပြုအမူရှိသည်ဖို့စတင်ပါလိမ့်မည် - "။ အာလဖအမျိုးသား Ecstasy" မယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်သောသင်ပေးခြင်း
4-Androsterone အဆိုပါ prohormone running ၏ 8 ရက်သတ္တပတ်မှ 12 အတွင်းပိန်ကြွက်သားထုထည်၏ 4-6 ပေါင်ပတ်လည်အထူးသကြွက်သားအကျိုးအမြတ်၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိုပစ်မှတ်ထား။ ဒီသက်ရောက်မှုကိုလက်ျာအစားအစာနှင့်လေ့ကျင့်ခန်းတွေနဲ့ပိုပြီးထင်ရှားပါလိမ့်မည်သတိပြုပါယူပါ။
4-Andros ယူပြီးတဲ့အခါသင့်ရဲ့သွေးပေါင်ချိန်ကိုထိခိုကျနိုငျအဖြစ်ဟုတ်ပါတယ်, သငျသညျသံသရာထောက်ခံမှုအပေါ်လိုအပ်ပါတယ်။ ဒါဟာကျန်းမာတဲ့သွေးဖိအားအဆင့်ဆင့်ကိုလှုံ့ဆော်ဖို့အတွက်လည်းမရှိမဖြစ်အရေးပါသည်။
ဒါကြောင့်အခြေခံကျကျသူ့ရဲ့ပုံမှန်ဟော်မုန်းဟန်ချက်ပြန်လည်ထူထောင်အတွက်သင့်ခန္ဓာကိုယ်အကူအညီပေးနေတာနေချိန်မှာသင်ရလဒ်များကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းရန်ကူညီပေးပါမည်အဖြစ်အလားတူပင် post ကိုသံသရာကုထုံး (ရာခိုင်နှုန်း) သည်သံသရာ၏အရေးပါသောအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
သငျသညျသတိထားရောက်ထားရန်လိုအပ်ပါတယ်စုံတွဲတစ်တွဲဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေရှိပါတယ်။ 4-Andros 1-Andros အဖြစ်အားလုံးအတူတူပင်ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေရှိပါတယ်။
ဆံပင်ကျွတ်, ဝက်ခြံ, ဆီးကျိတ်ပျတိုး, testicular ကျုံ့များ၏ခြိမ်းခြောက်မှု, ကိုယ်တွင်းအင်္ဂါ, မြင့်မားသောဖိအားနှင့်အခြားနှလုံးသွေးကြောဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များတွင် strain တိုးတက်လာခဲ့သည်။
သင့်ရဲ့ LDL (မကောင်းတဲ့) လက်စထရောတက်သွားနှင့် HDL (ကောင်းသော) လက်စထရောပါလိမ့်မယ်ဆင်းသွားလိမ့်မည်။ သင်၏နှလုံးအတှကျကောငျးဘူး။
သင့်ရဲ့သံသရာပြီးဆုံးပြီးနောက်ဖြစ်စေလမ်း, ဤဘေးထွက်ဆိုးကျိုးစုံတွဲတစ်တွဲရက်သတ္တပတ်ငြိမ်းလိမ့်မည်။ ဒါကြောင့်သူတို့ကရေရှည်မရှိကြပေ။
ရှေ့တော်၌, အသွေးသည်အလုပ်ရရန် Make ပြီးနောက်, သင်၏သံသရာအတွင်းမှာ။ လက်ပေါ်သံသရာကုထုံးအပေါ်လည်းရှိသည်။
သငျသညျရိုးရှင်းစွာပဲသင့်ရဲ့သံသရာအရှည်တိုနှင့် / သို့မဟုတ်သောက်သုံးသောလျှော့ချခြင်းဖြင့်ထိုအဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေကိုလျှော့ချနိုင်ပါတယ်။
အလုပ်လုပ်ရက်ပေါင်းငွေပေးချေပြီးနောက်3ထွက်ပေးပို့အကြောင်းကြားနိုင်ပါကြောင်းပိုကြီးတဲ့အမိန့်သည်။
4-Andros မျှဘေးထွက်ဆိုးကျိုးအနည်းငယ်သာရှိပါတယ်။ သင်တစ်ဦးအသေးအဖှဲအီစထိုဂျင်ပြောင်းလဲခြင်း, ကြွက်သားကြွက်တက်, သွေးတိုး, ကျူးကျော်ခြင်းနှင့်အချို့ကိစ္စ gynecomastia (gyno) တွင်တွေ့ကြုံခံစားစေနိုင်သည်။
တစ်ဦးအီစထိုဂျင် blocker အီစရိုဂျင်ပြောင်းလဲလျော့ချခြင်းနှင့် gyno အဖြစ်ကောင်းစွာကဲ့သို့သောအခြားအီစထိုဂျင်ချိတ်ဆက်ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေကိုရှောင်ကြဉ်ရန်လိုအပ်ပေသည်။ ဤရွေ့ကားသက်ရောက်မှုကိုလျှော့ချသို့မဟုတ်လုံးဝလက်ျာပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုဖြည့်စွက်နှင့်အတူတားဆီးနိုင်ပါသည်။
AASraw ထံမှ 4-DHEA အမှုန့်ကိုဝယ်ဖို့ကိုဘယ်လို
ဘယ်လိုအများကြီး 4-DHEA testosterone သို့ပြောင်းလာ?
Trestolone Acetate (MENT) အမှုန့်
Cytomel (T3) အမှုန့်
အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော 2.755ထဲက
testosterone Cypionate (စမ်းသပ်ခြင်း cyp) အမှုန့်
Methenolone Enanthate အမှုန့်
Dienolone အမှုန့် (6218-29-7)
Estradiol Benzoate အမှုန့်